Maqaal Colaadda soomaalida iyo oromada! | ogaden24
Maqaal Colaadda soomaalida iyo oromada!
Dec 14, 2018 - Aragtiyood
Dalka itoobiya waxaa ku nool tobannaan qowmiyadood oo aan is oggolayn, laakiin si qasab ah laysugu hayo. Dhawrkii qarni ee la soo dhaafay boqortooyada axmaaradu waxay geeska afrika ka wadday dhul ballaadhsi ujeedkiisu ahaa in guud ahaanba dhulka soomaalida la hoos geeyo xukunka itoobiya. In kastoo aanu hindisa dhul-ballaadhsiga xabashidu si kaamil ah u hirgalin hadda na 50% axmaaradu way ku guulaysatay (Damacii wali waa jiraa, mana istaagi doono).
Qowmiyadda, Oromada oo ah bulsho beeraley ah, tiro ahaanna aad u badan, deegaan ahaanna dhulwayn leh; waxay ka mid ahayd qowmiyadihii axmaaradu xoogga ku qabsatay. Waa la bahdilay, faqri iyo baahi ayaa na lagu laayey, wax soo saarkooda ayaa la la qaybsan jiray (Soomaalida ba waa lagu samayn jiray laakiin is ma dhiibin). Soomaalida iyo oromadu waxay ka tirsan yihiin; bahwadaagta ‘Kushitigga’ waxaa ka dhaxayn jiray xidhiidh iskaashi oo taariikhi fog leh. 1960-kii markii qayb ka mid ah soomaalidu ka xorowday saancaddihii reer yurub, way caawin jirtay oromada sifo ay u xoroobaan. Taariikhdii hore iyo hadda ba waxaa ka dhexeeya labada bulsho xidhiidh dhaqan-dhaqaale oo aad u facwayn. Afka oromada waxaa lagu qoray magaala madaxda muqdisho; 1978. Idaacaddii ugu horraysay ee af-oromo ku baxda waxaa laga sii daayey radio muqdusho. Hadda ba xidhiidh kaasi taariikhiga ahi halkee ku danbeeyey?
Xukunkii boqortooyada Axmraada waxaa ugu danbeeyey xayle selaase oo boqorka itoobiya noqday sannadkii 1930, waxaase si qasab ah xukunka looga tuuray 1974-tii. Xilligaas oo ay jireen kacdoonno ay ardayda jaamacadaha itoobiya hormuud ka ahaayeen, ugu danbaynna galaaftay kursigii xayle selaase oo isu caleema saaray boqorka afrika. Magiciisii hore waxaa la odhan jiray ‘Tafari Mokonen Wolde-mekael’ siday taariikhdu qorto waxa uu ahaa guumayste kii ugu xumaa ee abid soo mara bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan soomali galbeed. Waxa uu ahaa ninkii riyo maalmeed ku tilmaami jiray, aragtida soomaaliwayn iyo israacii woqooyi iyo koobfur. Waxaa baddalay mengistu xayle maryan oo is na 1974-tii illaa 1991-dii xukun millatari ku haystay itoobiya. Intuu talada hayey, waxaa itoobiya ka dhacay xasuuq ba’an. Jabhado hubaysan ayaa dagaal adag la galay xukunkana ka tuuray ugu danbayntii. Dhinaca soomaalida jabhaddii WSLF ayaa jirtay oo soomaali galbeed ka dagaallami jirtay. Dagaal wayn oo taariikhda galay ayaa dhexmaray itoobiya iyo soomaaliya (Jaalle Siyaad barre iyo mengistu ayaa kala xukumayey labada dal).
Mengistu waxaa xilka laga tuuray: 1991-dii, jabhadaha OLF , TPLF IYO EPLF Ex- ELF iyo ONLF ayaa ka tuuray (Ururka ONLF ma hubaysnayn, laakiin saddexda kale ayaa hubaysnaa) jabhadaasi isku ujeeddo ayey ahaayeen. Ururka OLF (Oromo Liberation Front) waxay aaminsanayd in oromadu yeelato qaran madax bannaan, fikirkaas bayna wada qabeen; ONLF (Ogaden National Liberation Front) EPLF (Eriterian People’s Liberation Front) iyo TPLF ba. Laakin TPLF iyadu way is baddashay markii mengistu xukunka laga tuuray, waxayna ku adkaysatay inay itoobiya cusub oo federaal ah samayso. TPLF-ta dagaal ayaa dib-u-dhex-maray saddexda jabhadood, ka dib markay ka tanaasushay, go’aankii gooni istaagga. Jabhadda ONLF iyadadu 1994-tii ayey si rasmi ah hubka u qaadday, duurkana u gashay!
Intaas aan kaga soo gudubno taariikhda itoobiya soo martay oo koobaan, u na laabanno cinwaanka qormadeenna oo ah colaadda soomaalida iyo oromada!
Afarta jabhadood ee kor ku xusani markay xukunka ka tuureen mengistu (ONLF, OLF, EPLF IYO TPLF) sidaan horay u sheegayna dhammaantood ba na ay gobanima-doon ahaayeen, ayaa TPLF oo markaa ugu awood badnayd marka laga reebo EPLF ayaa ku adkaysatay inay xukunka itoobiya qabsato. Reer-galbeedku mayna rabin in itoobiya kala tagto, hase yeeshee TPLF ayey xukunka itoobiya u dhiibeen. TPLF Iyo jabhadihii kale na dagaal iyo colaad baa u billowday.
EPLF way ku guulaysay ka midha dhalintii go’aankeeda. Laakiin, OLF iyo ONLF oo mucaarad ah iyo TPLF oo xukunka haysata ayaa muddo 27 sano ah dagaallamayey kuna hardamayey geeska afrika. Tigraygu waxay ku fakareen siday colaad guun ah uga dhex hurin lahaayeen, labada qowmiyadood si aan labadooda urur ee gobanima doonka ahi isu bahaysan (ONLF iyo OLF). Waxay falkiyeen taariikh aan jirin iyo been wayn oo ah in dhulka soomaalidu deggan tahay guud ahaan ba oromo leedahay, xoogna lagaga haysto. Qowmiyadda soomaaliduna daaqsin ku timid dhulka ay maanta taallo. Ujeeddadu waa in la isku mashquuliyo soomaalida iyo oromada si xukunka tigraygu u waaro. Beentaas waxaa laga soo minguuriyey, boqortooyadii axmaarada oo ku doodi jirtay in soomaalidu daaqsin dhulka ku timid! Meles zenaawi waxa uu sameeyey labo xisbi oo gacan ku rimis ah oo fuliya afkaartiisa la na kala huwiyey magaca labada qowmiyadood ( OPDO/Oromo people’s democratic organization, iyo ESPDP Ethiopian Somali Peopke’s Democratic Party)
Kacdoonkii Jabhadaha OLF iyo ONLF hormuudka ka ahaayeen marnaba ma joogsan, laakiin furinta dagaalka waa lagu wiiqay. Dhimashadii Males Senawi kadib waxaa dib u bilowday kocdoon xooggan oo gilgilay itoobiya, mashiinka kacdoonku dhaqaajinayaa waxa uu ahaa jabhadaha hubaysan (ONLF, OLF iyo Ginbot 7) mar ba marka ka sii danbaysa ayuu kacdoonku sii adkaanayey, illaa xukunka oromadu qabsato Tigraygiina laga tuuro. 2016-kii ayaa si rasmi ah colaad gacan-ku-rimis ah looga huriyey xuduudka dheer ee labada bulsho wadaagaan si loo qaboojiyo kacdoonka ama loo marin habaabiyo. Nasiib darro Maamulka soomaalida ayaa loo adeegsaday hurinta colaadda. Laakiin waxaa lays waydiinayaa, sababta dagaalku u sii socdo, haddii laga adkaaday, tigraygii iyo maamulkii kaba qaadka ahaa?
Jawaabta su’aashan iyo qaar kale ba waxaan ku soo qaadan doonnaa qormooyinkeenna xiga iyo hadda sida xaalku yahay. Labada maamul ba isku ayey dagaalka uga wada wayb ahaayeen wixii ka horreeyey isbaddalka itoobiya ka dhacay!
Waxaan ka tagay ha lagu daro, waxaan khalday na ha la saxo, gaar ahaan taariikhda!